साउनदेखि आई.एम.ई.आई दर्ता नभएका मोबाईल नचल्ने, यस्तो छ दर्ता प्रक्रिया
विराटनगर । आगामी साउनदेखि सरकारले मोबाइल डिभाईस म्यानेजमेन्ट सिस्टम सञ्चालनमा ल्याउने भएपछि नेपालमा अवैध रुपमा भित्रिएका मोबाईल नचल्ने भएका छन् ।
साउन १ गतेदेखि नेपालमा खरिद गरिएका बाहेक अन्य सबै प्रकृतिका मोबाईल नचल्ने भएका हुन । यसअघि जेठ १ देखि अवैध फोन बन्द गर्ने तयारी गरिए पनि कोरोना महामारीका कारण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको मोबाईल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम परियोजनाको समय अघि सरेको थियो ।
तर हाल भने सिस्टम सञ्चालनका लागि आवश्यक हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर जडानको कार्य सम्पन्न भईसकेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । उनले साउनदेखि नेपालमै खरिद गरिएका मोबाईल मात्र चल्ने जानकारी दिए । ‘हामीले अहिले सिंहदरबारभित्र रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा यसको आवश्यक सिस्टम सेटअप गरेका छौं,’ उनले भने, ‘चीनबाट मगाईएको डेटा सेन्टरको कन्टेनर समयमै आउन नसक्दा सञ्चालनमा ढिलाई हुने भएको हो ।’
प्राधिकरणले भने विगत ५ वर्षदेखि अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाईल बन्द गराउन मोबाईलको आई.एम.ई.आई. दर्ता गराउने कार्य गर्दै आएको छ । जसअनुरुप साउनदेखि विदेशमा खरिद गरिएका मोबाईलहरुको आई.एम.ई.आई. दर्ता अनिवार्य भएको छ ।
यसरी पत्ता लगाउनुहोस आफ्नो मोबाइलको आई.एम.ई.आई नम्बर
आफ्नो मोबाइल दर्ता गर्नुअघि सुरुमा आई.एम.ई.आई नम्बर कति हो भन्ने कुराको जानकारी हुन आवश्यक छ । आधिकारिक रुपमा नेपाल भित्रिएका मोबाइलको आई.एम.ई.आई नम्बर आयातकर्ता कम्पनीले सुरुमै दर्ता गरिसकेका हुन्छन् । तर विदेशबाट उपहारको रुपमा आउने तथा व्यक्तिगत रुपमा किनेर ल्याइएका र अवैध रुपमा भित्रिएका मोबाइलको आई.एम.ई.आई नम्बर भने दर्ता भएको हुँदैन । कतिपय अवस्थामा नेपालमै किनेका तथा पुराना मोबाइलको पनि आई.एम.ई.आई नम्बर दर्ता नभएको हुनसक्छ । साउनदेखि त्यस्ता मोबाईलहरु चल्दैनन् ।
दर्ताका प्रक्रियाका लागी आफ्नो मोबाईलमा *#06# डायल गरि मोबाईलको आई.एम.ई.आई नम्बर पत्ता लगाउन सकिन्छ । यदि मोबाइलले एउटा मात्र सिम सर्पोट गर्ने हो भने एउटा मात्र आई.एम.ई.आई नम्बर देखाउँछ । यदि दुई वटा सिम लाग्छ भने दुईवटा आई.एम.ई.आई नम्बर देखाउँछ । त्यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणको बेवसाईटमा दुईवटै आई.एम.ई.आई नम्बर दर्ता गर्नुपर्छ ।
आई.एम.ई.आई नम्बर दर्ता भए/नभएको कसरी थाहा पाउने ?
आई.एम.ई.आइ नम्बर दर्ता भए/नभएको थाहा पाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वेबलिंक https://eir.nta.gov.np/main मा क्लिक गर्नुहोस । यसमा ‘नो योर डिभाईस’ भन्ने अप्सन दिईएको छ । उक्त अप्सनमा गएर तपाईंले आफ्नो मोबाइलको आई.एम.ई.आई नम्बर हाली दर्ता भए/नभएको थाहा पाउन सक्नुहन्छ ।
यस्तो आई.एम.ई.आई नम्बर दर्ता प्रक्रिया
यदि तपाईंको मोबाइलको आई.एम.ई.आई दर्ता भएको छैन् भने त्यसलाई अनलाइनबाटै दर्ता गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत रुपमा आफ्नो मोबाइलको आई.एम.ई.आई नम्बर दर्ता गर्नका लागि यो लिंकमा गएर सुरुमा साइनअप गर्नुहोस । साइनअप गर्ने बित्तिकै त्यहाँ ‘न्यु इम्पोटर’ र ‘इन्डिभिजुअल एप्लीकेशन’ को अप्सन देख्नुहुने छ ।
इन्डिभिजुअल एप्लिकेशनमा क्लिक गरी भित्र जानुहोस । त्यहाँ तपाईंलाई एउटा फर्म प्राप्त हुने छ । उक्त फर्ममा आवश्यक जानकारी भर्नुहोस । साथै सरकारबाट उपलब्ध गराईएको कुनैपनि एउटा आधिकारिक परिचयपत्रको स्क्यान कपी पनि बुझाउनुहोस । यति भएपछि उपलब्ध जानकारीका आधारमा प्राधिकरणले तपाईको विवरण अध्ययन गरि दर्ता गर्नेछ ।
अनलाइन दर्ता प्रक्रियामा प्राविधिक समस्या वा थप जानकारी आवश्यक भए नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको फोन नम्बर ०१-४२५५४७४ मार्फत सम्पर्क गर्न सकिने जनाईएको छ ।
सोमबार, १७ जेठ, २०७८, रातीको ०९:५३ बजे
To register my phone which I bought from jogbani